Nabil Fekir Oo Ka Hadlay Sababtii Uu Burburay Heshiiskii Uu Ugu Biiri Lahaa Liverpool Isagoo Qiray Inuu Tijaabada Caafimaadka U Maray - Gool24.Net
Nabil Fekir Oo Ka Hadlay Sababtii Uu Burburay Heshiiskii Uu Ugu Biiri Lahaa Liverpool Isagoo Qiray Inuu Tijaabada Caafimaadka U Maray
Nabil Fekir ayaa shaaca ka qaaday in sheegashadii aheyd in heshiiskii Liverpool ee xagaagii 2018 inuu u burburay inuu ku dhacay tijaabada caafimaadka inay been tahay, islamarkaana uu jilibkiisa aad u fiican yahay.
Waxaa si weyn loo tabiyay in Lyon iyo Liverpool ay isku raaceen heshiis 53 milyan ginni ah 12 bilood ka hor iyadoo ciyaaryahanka uu xitaa wareysi siiyay Liverpool TV ka hor inta uusan heshiiska burburin.
Waxaa la rumeysan yahay in Liverpool ay isku dayday inay dib wadahadal uga gasho heshiiska ka dib markii tijaabada caafimaadka ay soo baxday inuu dhibaato ka qabo jilibka. Fekir ayaa dhaawac halis ah uu ka soo gaaray jilibka xilli ciyaareedkii 2015-16, laakiin tan iyo markaas wax dhaawac kale oo halis ah ma uusan soo gaarin.
Ka dib natiijada tijaabada caafimaadka Liverpool ayaa ka baxday heshiiska taasoo keentay in Nabil Fekir uu xagaagan si lama filaan ah heshiis 22 milyan ginni ugu wareego kooxda Isbaanishka ee Real Betis.
Si kastaba, wareysi uu siiyay wargeyska Faransiiska ee L’Equipe ayuu Fekir ku sheegay in waxba uusan ka qaldaneyn jilibkiisa, islamarkaana uusan wax feker ah ka heysan sababta heshiiskiisa Anfield uu u burburay.
“Been badan ayaa la sheegay taasoo saameyn igu yeelatay” ayuu yiri. “Gaar ahaan beentii laga sheegay qoyskeyga. Waa ay dhaawacday iyaga, anigana waa ay i dhaawacday.
“Wixii la sheegay run mahan. Jilibkeyga waa uu fiican yahay, waxaan tijaabada caafimaadka ku maray xarunta tababarka xulka France, jilibkeyga lama soo hadal qaadin xitaa. Haddii jilibkeyga uu dhibaato qabo muxuu madaxweynaha Lyon iigu soo bandhigay qandaraas weyn oo aan kooxda ku sii joogo?
“Laakiin waxa ugu xun ayaa ah in la soo jeediyay in heshiiska uu u burburay qoyskeyga dartiisa. Waa been.
“Runta ma rabtaa? Aniga xitaa ma ogi sababta uu heshiiska u burburay. Waxaan maray tijaabada caafimaadka, ka dibna Liverpool ayaa go’aansatay inaysan ila saxiixan. Jilibkeyga waxa uu ahaa kaliya marmarsiiyo.”